Attenuator Vagadziri & Vanopa | China Attenuator Fekitori
ST Yakamisikidzwa Mukadzi kune Male Fiber Optic Attenuator
Fixed Optical attenuator anoshandiswa mune iyo fiber optic zvinongedzo kudzikisa iwo magetsi emagetsi pane imwe nhanho. Inowanzo shandiswa fiber optic attenuator ndeye mukadzi kune murume mhando, iyo inonziwo plug fiber attenuator. Iwo ane zvedongo ferrules uye kune akasiyana marudzi kuti akwane akasiyana marudzi efaipi optic zvinongedzo. Yakagadziriswa kukosha fiber optic attenuator inogona kudzikisira iwo magetsi emagetsi padanho rakasarudzika, Variable fiber optic attenuator ine inogadziriswa yekudzivirira renji. Zvimiro ♦ Wide ...
SC Yakagadziriswa Optical Attenuator
MU Yakagadziriswa Fiber Optical Attenuator Murume kusvika Mukadzi
Fixed Optical attenuator anoshandiswa mune iyo fiber optic zvinongedzo kudzikisa iwo magetsi emagetsi pane imwe nhanho. Inowanzo shandiswa fiber optic attenuator ndeye mukadzi kune murume mhando, iyo inonziwo plug fiber attenuator. Iwo ane zvedongo ferrules uye kune akasiyana marudzi kuti akwane akasiyana marudzi efaipi optic zvinongedzo. Yakagadziriswa kukosha fiber optic attenuator inogona kudzikisira iwo magetsi emagetsi padanho rakasarudzika, Variable fiber optic attenuator ine inogadziriswa yekudzivirira renji. Inotaridza Zvakawanda pa ...
LC Yakagadziriswa Fibre Optical Attenuator Murume kusvika Mukadzi
Inline Yakachinjika Optical Attenuator
Iyo mu-mutsara inowoneka Optical attenuator (VOA) inogadziridzwa nemaoko, inoshandiswa kunyatso kuenzanisa simba remasaiti mumaseketera efaera, kana kuenzanisa chiratidzo che optical kana uchiongorora huwandu hwesimba hweyero yekuyera. Zvimiro ♦ Simbi ion doped fiber, Yakakwira-simba mwenje sosi yakasimba, Wavelength rusununguko levels Matanho ekumusoro anotangira kubva 1dB kusvika 25dB ♦ 1310nm, 1550nm uye 1310 / 1550nm huviri wave wave urefu Zvikumbiro, Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFA) ♦ Dense Wave Division M. ..
Optical musiyano attenuator, adapteri mhando, 0 ~ 30 dB kuderedzwa, 1310 & 1550nm, huviri hwindo, FC / PC. KUSVIRA Telecommunication Networks EDFA CATV Networks Anoshanda mudziyo kugumisira Instrumentation ZVIMWE ZVAKAWANDA kudzvanywa renji, Zvakatipoteredza kugadzikana, Precision zvedongo ferrule Rakajeka uye Rakavimbika Sisitimu ZVINODZIDZWA Mamiriro ezvinhu Mamiriro Maitiro Firita Mhepo Gap Kuchenesa renji 0 ~ 50dB 0 ~ 28dB Kugadziriswa 0 ....
FC Yakagadziriswa Optical Attenuator
Fixed Optical attenuator anoshandiswa mune iyo fiber optic zvinongedzo kudzikisa iwo magetsi emagetsi pane imwe nhanho. Inowanzo shandiswa fiber optic attenuator ndeye mukadzi kune murume mhando, iyo inonziwo plug fiber attenuator. Iwo ane zvedongo ferrules uye kune akasiyana marudzi kuti akwane akasiyana marudzi efaipi optic zvinongedzo. Yakagadziriswa kukosha fiber optic attenuator inogona kudzikisira iwo magetsi emagetsi padanho rakasarudzika, Variable fiber optic attenuator ine inogadziriswa yekudzivirira renji. Zvimiro ...